Kedu ka ị si agụ nwere ike atesbọchị. - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Gụọ ụbọchị mmebi - otu esi edozi
Gụọ ụbọchị mmebi - otu esi edozi
Kedu ka ị si agụ nwere ike atesbọchị.
Nọmba 1 ruo nke 9 na-anọchi anya ọnwa Jenụwarị ruo Septemba, n’usoro. Akwụkwọ ozi 'O' na-apụtakarị Ọktọba, 'N' na-anọchite anya Nọvemba na 'D' na-anọchi anya Disemba n'ọtụtụ mkpọ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ depụtara ọnwa mgbeụbọchị, yabụ lee ebe ọzọ na koodu ahụ maka leta.
Ndewo, aha m bụ Oli. Nabata na Oxford Online Bekee. Ka m jụọ gị ajụjụ, 'Olee mgbe ụbọchị ọmụmụ gị?' Nke a bụ ajụjụ dị mfe, mana ọtụtụ ndị na-amụ bekee enweghị ike ịza ya n’enweghị mmejọ, ọ bụ maka na ị na-agụ Afọ na bekee - ọnwa, afọ, na ụbọchị - dị mgbagwoju anya.
akwukwo ndu ndu
N'ime nkuzi a, anyị ga-eleba anya etu esi agụ ụbọchị na bekee. Ka na-amalite na otu ihe atụ. Yabụ ịhụ nke ahụ.
Kedu ka ị ga-esi kwuo ya N'ezie, enwere nhọrọ abụọ. I nwere ike ịsị, “Nọvemba iri na anọ” ma ọ bụ “Nọvemba abalị iri na anọ.” Ka anyị mee atụ ọzọ.
See hụrụ nke ahụ. Kedu ka ị ga-esi kwuo ya? Ọzọkwa otu ụzọ abụọ ahụ: 'Septemba nke iri atọ' ma ọ bụ: 'Septemba iri atọ'. Can nwere ike ịhụ na anyị anaghị edekarị okwu ndị a, 'nke' na 'nke', mana anyị na-ekwu ha 'the', ọkachasị na bekee nke bekee, yabụ ọ bụrụ na ịmaghị n'aka na ọ ka mma iji 'the'.
Ọzọ, ka anyị lelee afọ, kedụ maka afọ, ka anyị lelee afọ ise ma achọrọ m ka ị chee otu ị ga-esi kwuo ha. Chebara azịza gị echiche. Cheretụ isiokwu ahụ obere oge ma ọ bụrụ na ị maghị, azịza gị.
Ọ dị mma, ka anyị leba anya, anyị na-asị, 'narị na iri na itoolu', 'iri na itoolu oh abụọ', 'Iri na iri na asatọ', 'puku abụọ na otu', 'puku abụọ na iri' ma ọ bụ 'Iri abụọ na iri'. Anyị chọrọ iwu dị iche iche maka ọtụtụ afọ tupu puku abụọ na puku abụọ. Yabụ afọ ole na ole tupu 2000, ọ bụrụ na afọ gwụ na '00', jiri ọtụtụ narị, ọ bụghị puku.
Ya mere kwuo, sị: 'narị iteghete na narị' na ọ bụghị 'otu puku, narị iteghete' 2
03 'wdg, kpọọ' efu 'dị ka' oh 'ma asịla otu narị. Ya mere anyi ji asi 'iri na itoolu oh otu', 'iri na asato oh oh', 'iri na asaa oh ise' na na.
Ọ bụrụ na afọ ahụ gwụ na ọnụ ọgụgụ karịrị iri, kwuo afọ ahụ n'akụkụ abụọ. Iji maa atụ: 'iri na asatọ na iri abụọ', 'iri na itoolu na iri ise na ise' ma ọ bụ 'iri na iteghete iri itoolu na itoolu'. Anyị chọrọ iwu dị iche iche maka afọ mgbe 2000 gachara.
Maka afọ 2000-2009, jiri ọnụ ọgụgụ zuru ezu. 'Puku abụọ', 'puku abụọ na otu', 'puku abụọ na abụọ' wdg. Maka afọ 2010-2019 ị nwere ike ịhọrọ: you nwere ike ikwu ọnụ ọgụgụ zuru ezu - ị nwere ike ịsị 'puku abụọ na iri,' ma ọ bụ ị nwere ike kwuo afọ abụọ n'akụkụ: 'Iri abụọ na iri.' Otu ihe a na-agazu afọ niile a, yabụ ị nwere ike ịsị, 'Iri abụọ na iri na otu' ma ọ bụ 'puku abụọ na iri na otu'. Ha abuo di mma.
Maka 2020 na gafere, ị ka nwere ike ịhọrọ ịsị afọ ahụ n'akụkụ abụọ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ zuru ezu, mana ịsị na afọ ahụ n'akụkụ abụọ ga-adịkarị na puku mmadụ iri abụọ na iri abụọ 'ọ bụ ezie na ha abụọ dị mma. Mgbe ụfọdụ truncate anyị data ma jiri obere ụdị. Iji ma atụ, anyị na-ebelata ọtụtụ afọ site n’oge gara-aga site n’ịgụ nanị ọnụọgụ abụọ ikpeazụ n’afọ.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịsị 'iri asatọ na otu' maka 1981 dị ka, 'Amụrụ nwanne m nwoke iri asatọ na otu. '2001 nwere ike ịbụ' oh-one ':' M gụsịrị akwụkwọ na oh-one '.' 1999 nwere ike ịbụ 'iri itoolu na itoolu', dị ka: 'Ọ malitere ịrụ ọrụ ebe a mgbe ọ dị afọ itoolu na itoolu.' Oge ụfọdụ anyị na-ebelata ọnwa site n'iji ọnụọgụ nke ọnwa karịa aha.
Ya mere ọ bụrụ na ncheta ọmụmụ gị dị na June 20, 1989, ị nwere ike ịgụ ya dị ka nke a: 'Nke iri abụọ nke isii, iri asatọ na itoolu.' Nke a bụ ihe a na-ahụkarị ọkachasị mgbe ị na-enye ozi na ekwentị, ma ọ bụ n'ụlọ akụ, na ụlọ ahịa, ihe dị otu a, ndị mmadụ na-eji nke a ntakịrị ihe. Ọ dị mma, nke ahụ bụ isi ihe mmụta ahụ, nwee olile anya na ị bara uru.
Ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe a na YouTube, ana m akwado ka ị gụọ nkuzi zuru oke na weebụsaịtị anyị, nkuzi zuru ezu nwere ederede na omume iji nyere gị aka ịme isiokwu a, mana nke ahụ niile, daalụ maka ikiri na anyị ga-ahụ anyị oge ọzọ. .
Kedu ka ị si agụ ụbọchị mmebi nke Canada?
Ihe 'Dị mma tupu''ụbọchịaghaghi ichoputa ya site na iji okwu ndia 'Dị mma tupu'na' meilleure avant 'ya naụbọchị. Ndị a nwere ike ịpụta ebe ọ bụla na ngwugwu - ma ọ bụrụ na ala, ekwesịrị igosi ebe ahụ na ebe ọzọ na aha ahụ.Ọgọst 13 2013
Gịnị mere anyị kwesịrị iji gụọ ụbọchị mmebi?
Bọchị mmebibụụbọchịihe oriri na-ejigide microbiological na anụ ahụ kwụsie ike, yana ọdịnaya edozi ahụ kwupụtara na label. Nke ahụ pụtara na ọ dị mkpa iji nri ahụ tupuụbọchị mmebiiji nweta ọtụtụ ihe oriri na-edozi ahụ na ya.Mar 9 2012
Know ma nke ahụ jọgburu onwe ya, na-esi ísì ụtọ nke mmiri ara ehi nwụrụ anwụ? Eeh. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịnụ ya otu ugboro iji jide n'aka na ọ gaghị eme ọzọ. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ndị na-emepụta nri nwere ụdị ụfọdụ kachasị mma tupu ụbọchị, nke kachasị mma tupu ụbọchị, ma ọ bụ jiri ụbọchị na ngwaahịa ha iji gwa gị nke ọma, ha anaghị agwa gị ọtụtụ.
Ulo ndi a bu ihe di nma na ihe uto, obughi nche. Ọtụtụ nri a na-ahụkarị bụ ndị a na-eri eri karịa ihe ọ na-ekwu na aha ahụ, na-eme ka o sie ike ịchọpụta ihe ị ga-eri na ihe kwesịrị ịdị na compost. Mana understandingghọta ihe na-eme nke ọma mgbe nri mebiri tupu na mgbe ụbọchị ahụ gasịrị ga-enyere gị aka.
kedu ihe m ji bilie
Oge mmebi nke ngwaahịa ga-esiri ike ịkọ n'ihi na ihe niile site na nhicha ụlọ ọrụ ahụ na ọnọdụ okpomọkụ nke friji gị nwere ike imetụta. Agbanyeghị, ọtụtụ dabere n'ụdị nri ị zụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa nwere ike bụrụ ọnweghị nchedo mgbe awa ma ọ bụ izu izu zụrụ ha gasịrị; a nnukwu mgbanwe na ọtụtụ kwudịrị na-eleghara anya.
Ọtụtụ n'ime ihe ndị a metụtara ịkpụzi ebu, ọ bụghị ihe dịka ntụpọ aja aja. Ha adighi adi nma, ma ha adighi emeru ahu. Strafọdụ nsogbu na-emepụta ihe a na-akpọ mycotoxins, nke nwere ike ibute ihe ọ bụla site na ọrịa akpụkpọ ahụ na ọbara ọgbụgba na ọnwụ.
Ebe ọ bụ na ngwaahịa bụ mmiri na ụlọ bara ụba nke na-akpụzi, ha nwere ike itolite n'ụlọ naanị awa 24 mgbe ebubatasịrị ngwaahịa gị. Na okpomọkụ na-ekpo ọkụ ọ na-eto ngwa ngwa karịa, dịka na tebụl kichin gị nke anwụ na-acha. Agbanyeghị, ọ ga - adị mkpa ka ịgbatị ndụ ngwa ahịa gị ngwa ngwa Ọ dị mfe: sọba ya na ngwa nju oyi.
Omume kemịkal na-ewere nwayọ nwayọ na oyi na-atụ oyi, yabụ ọ na-ewe ogologo oge maka ebu ka ọ bawanye ma bawanye na ya, ma ọ ga-emecha too, ma mgbe otu ụbọchị gachara ma ọ bụ izu ole na ole Ọ bụ oge maka compost. Wedata ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịbụ nnukwu aghụghọ iji chekwaa ọtụtụ nri. ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie inupụ azụ ngafe ụbọchị, bacteria kwesịrị gburu tupu ha nwere ike ịba ụba.
Ọ dịghị mfe na ngwaahịa, mana nke ahụ bụ etu anyị si emeso mmiri ara ehi. Dabere na akara ahụ, mmiri ara ehi na-adịkarị mma karịa izu abụọ mgbe ịzụrụ ya. Ma dabere na ụdị nsogbu ị zụrụ na otu i si emeso ya, ọ nwere ike ịkwụsị ụbọchị ole na ole ma ọ bụ tupu mgbe ahụ.
Omenala ọdịnala na-aga site na usoro nke pasteurization, usoro ọgwụgwọ ọkụ na-enye denatures ma na-emerụ enzymes na nje dị ndụ, ezigbo ọrụ, mana ọ bụghị zuru oke. Offọdụ n'ime nje ndị a na-adịgide ndụ mgbe e mechara, ma, ka oge na-aga, gbanwee shuga ndị dị na mmiri ara ehi na acid lactic. Nke a bụ ihe na-enye emebi mmiri ara ehi na utoojoo isi.
Usoro a na-ewe izu ole na ole ma na-a usuallyụkarị ihe dị ka ụbọchị ise mgbe ọ kachasị mma-tupu ụbọchị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmiri ara ehi na-enweta ntakịrị ọkụ ebe ọ bụla n'okporo ụzọ mbupu, ma ọ bụ na ị na-agba friji gị obere ogo ọkụ, ọ nwere ike imebi ngwa ngwa. Ma ọ bụ ezie na o yighị ka ị ga-egwu ndụ site na ị fromụ mmiri ara ehi mebiri emebi, ị nwere ike iji nsị na-egbu nri n'ụzọ obi ọjọọ.
Ozi ọma ahụ bụ, ọ dị mfe ịmara ma mmiri ara ehi adịghị njọ. Naanị nwalee ya ma were ya na isi lactic acid. N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ọgwụgwọ okpomọkụ dị mma maka ịchụpụ nje bacteria na mmiri ara ehi, ịchọrọ usoro dị iche maka anụ.
Ọ na-abụkarị, nke kachasị mma tupu ma ọ bụ nke kacha mma tupu ụbọchị maka ngwaahịa ndị a bụ otu izu mgbe ịzụrụ, mana ebe ọ na-adịkarị mma n'oge ahụ, ọ naghị adịte aka. N'ihi na anụ bụ ebe izizi maka nje bacteria. Ọ bụ ụlọ mmiri na-edozi ahụ, nke nwere ụdị ume dị iche iche.
Abọchị ole na ole, nje ndị a agaghị ewetara gị nsogbu ọ bụla maka na ha enweghị ọtụtụ. Ma ka oge na-aga, ha na-amụba. I wee banye n’ime nsogbu.
Bacteria, dị ka Pseudomonas ma ọ bụ Lactobacilli, na-eri nri n'elu anụ ahụ, ebe ha na-enweghị mmiri mkpụrụ osisi na-ese n'elu mmiri na ogige ọkụ iji gosi. Offọdụ n'ime nje ndị a nwere ike ime ka ị rịa ọrịa, mana opekata mpe, ha ga-eme ka a mata mbata ha. Mgbe ha mebiri ogige ndị a, ha na-ahapụrụ ụfọdụ ngwaahịa sitere na ha.
Ndị a nwere ụdị na ụdịdị dị iche iche, mana ha niile dabara n'ụdị a na-akpọ ogige ndị na-agbanwe agbanwe, ma ọ bụ VOC. Ọtụtụ mgbe VOCS ndị a na-esi isi ka anụ rere ure. Ma n'ihi na ị na-ahụ ha mgbe nje bacteria na-eri ma baa ụba, enwere ezigbo akara ngosi na anụ gị adịla njọ.
Na mgbakwunye na isi, ị nwere ike ịsị na anụ gị agwụla dabere na otu o si dị. Dịka ọmụmaatụ, VOC dị ka hydrogen sulfide nwere ike ịgbanwe ụrọ anụ ahụ dị na anụ n'ime ihe dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a na-eme ụbọchị ole na ole mgbe ụbọchị njedebe na akara mmado a.
dum 30 maka ndị na-eme egwuregwu
Ma oburu n’ichoputa ihe ndia n’egwu di egwu ma obu nke kari n’elu beef gi oge eruola ibido n’agbanyeghi oge oga eme.
Nkà mmụta sayensị nwere ike ịghọ aghụghọ, na aha mmachi ndị a anaghị enyere aka mgbe niile. Knowingmara ntakịrị banyere otu na ihe kpatara nri mmiri ji enyere gị aka idobe ngwa nju oyi gị ogologo. Ma ọ bụrụ na ị maghị n'ezie kpọọ ya.
Daalụ maka ikiri ihe omume nke SciShow! Scishow bu nke Emeputara na Complexly, nke na eweputa uzo dika FinancialDiet, nke ndi Chelsea, Erin na Lauren na-emikpu onwe ha na okwu ego nke onwe ha n’enweghi egwu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụ maka ụzọ ndị ọzọ iji dobe friji gị ogologo oge na mmefu ego, lelee edemede ya Iwu maka Mastermụta Storelọ Ahịa Ahịa. Si obi mmetụta nke ego na oru ego okwu, na-amụta aghụghọ iji mee ka ndụ gị ka mma site na-adị mma na ego.
Lelee akwụkwọ ọhụrụ The Financial Diet na Tuesday ọ bụla na Tọzdee.
Kedu ka ị si agụ koodu ụbọchị Julian?
Nọmba mbụ nkeIanbọchị Julianna-anọchi anya afọ. Nọmba atọ gara aga na-anọchi anya ụbọchị e mepụtara ya. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na rụpụtaụbọchịedepụtara dị ka 1067 nke ahụ ga-apụta na e mepụtara MRE na Machị 7, 2011.
Kedu ụzọ kachasị mma iji gụọ ụbọchị mmebi?
Otu esi agu ubochi mmechi 1 guo koodu mechiri emechi dika ubochi emere / meputara. Gụọ akwụkwọ ozi dị ka a ga-asị na e kenyere ha ọnwa. 3 Dakọtara koodu ọnụọgụ niile na usoro 'ọnwa, ụbọchị, afọ'. 4 Tugharia koodu dijitaliti ato dika ubochi n'ime emeputara ngwa ahia. Lee More.
You nwere ịgụ ụbọchị mmebi na nri?
Ọ bụ ezie na inyocha nri maka ihe ịrịba ama nke mmebi bụ otu ụzọ iji chọpụta ogo ya, ịghọta otu esi agụ ụbọchị mmebi nri ga-eme ka ị mata na ị nwere ike ikpebi ebe nri dị na ndụ ya. Na-emeghe ụbọchị mmebi ngafe, naanị ị ga-agụ ụbọchị ịmara mgbe nri gafere.
Kedu ka ị si agụ ụbọchị mmebi na nke Hershey?
Hershey - Mechie ụbọchị. Nọmba mbu bụ afọ (0-9) leta nke abụọ bụ ọnwa (AL, nke bụ Jan-Dec). Mars - Datebọchị. Akpa digiti bụ afọ na-esote abụọ digits bụ izu nke afọ e mere ya. Nestle - Emere Datebọchị. Ọzọkwa, ihe nracha swiiti nwere ụbọchị njedebe.